Deputy Executive Director/General Manager
•	Bachelor of engineering (Electrical Power/ Mechanical/ relevant) MBA more preferable
•	High Voltage Transmission ဆိုင်ရာ Tendering ပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ [Techinical- substation/Line, commercial]
•	Development Agencies ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့် relation ရှိရမည်။ Project ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ [World Bank/ ADB/JICA]
•	International Brand Supplier/ Vendor ပိုင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်သည့် Relation ရှိရမည်။ [ABB/Siemen/Areva]
•	Trade Secret (H.V Transmission ) ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည် ဖြစ်သည်။
•	Operation & Technical ဌာနတစ်ခုလုံးကို ညှိနှိုင်းပြီး Strategy & Planning ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် S&M Target အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
No.(87/88),Bahosi Complex,Lanmadaw Township,Yangon.
Ph-01 229791 / 01 229792
Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: deputy executive director/general manager. 163 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ